April 2013 ~ လမင်းတရာ
IN Cleaner - ON 10:06 AM No comments
CCleaner ဆိုတာတော့ PC သုံးသူတိုင်းနီးပါး ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ကွန်ပျူတာထဲက မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးပြီး OS ကို သွက်လက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ ကောင်ပါ...
Portable ဆိုတော့ Install လုပ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေ...
Download>>>solidfiles (or) fileswap (or) zippyshare
· Temporary Files cache
· URLs History
· The location of the latest downloads Files
· History of executions (in the Start menu)
· Search Assistant history Windows XP
· Data ancient prerecuperados by Windows XP Hardware
· Windows Memory Dump after errors
· Cache tray notifications
· Window size and location in the cache
· History ASSIST users
· The IIS log files
Your Uninstaller! Pro 7.5 Full version with serial key
IN Uninstaller - ON 2:25 AM No comments
Your Uninstaller! Pro 7.5သူကတော့ တော်တော်တော်များသိကြမှာပါ မလိုအပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို
ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်Your Uninstalleအသုံးပြုသူတွေအတွက်Update လေးတွေလို့ 
ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ သူကကလစ်တစ်ချက်ထဲနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တာဖြုတ်လို့ရပါတယ်အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်ကလင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်မျာလိုင်စင်ကီး
ထည့်တဲ့အချိန်မှာ အင်တာနက်လေးပိတ်ထားပါခင်မျာ.... အဆင်ပြေပါစေ
Download>>>>solidfiles (or) dropbox (or) zippyshare
IN pdf - ON 1:53 AM No comments
သူက PDF ဖိုင်တွေကို အပြင်မှာ စာအုပ်ဖတ်သလို convert လုပ်ပေးတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
ဒီမှာ လေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်မျာ...
Download>>>>solidfiles (or) fileswap (or) zippyshare
IN Software - ON 1:14 AM No comments
TeamViewer လေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိပြီးသားလေးပါ Latest Version
လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Portable လေးဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Memory Stick ထဲဆောင်
ထားပြီးမည်သည့်စက် မှာမဆို install လုပ်စရာမလိုပဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
အသုံးပြုနည်း မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် ဒီနေရာမှာလေ့လာပေးပါ Size ~ 6.79 MB
IN IP Hider, Software - ON 1:03 AM No comments
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် IP ကို ၀ှက်ပြီးသုံးနေသူတွေအတွက် Auto Hide IP 5.3.4.2 ထွက်လာပါပြီ.. တစ်ချို့က ကိုယ့်နေရာကို မသိချင်လို့ Hide လုပ်တယ်.. တစ်ချို့က သူများကို တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ Hide လုပ်တယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာ IP ကို ဘန်းထားလို့ ဒေါင်းလို့ မရတဲ့ဆိုဒ်တွေကို ၀င်ဒေါင်းဖို့သုံးတယ်...
Auto Hide IP is supplied servers and configure proxy that look as though it really the original. With Auto Hide IP will enjoyatotally safe and free navigation of intruders seeking to learn or steal our information by illegal means through the original IP connection.
IN Driver Software, Portable - ON 1:01 AM No comments
Smart Driver Updater ကတော့ Online နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး PC အတွက် လိုအပ်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Drivers တွေကို Update လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.. Connection အသင့်အတင့်ရှိရုံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Drivers အမှားအယွင်းတွေကိုလည်း ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်... Drivers ခွေ ပျောက်နေသူများအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ...
Smart Driver Updater provides the latest technology to update drivers, so that even users less experienced manage devices. Withasingle click Smart Driver Updater scans your computer and all devices and recommends what drivers need updating. The broad base of data the program contains thousands of drivers that are constantly updated, so that users only download the most recent. Find the network device drivers, printers , monitors, keyboards, mice, modems, cameras digital, audio and video cards, etc.. Withaseries of simple steps, Smart Driver Updater will guide you to upgrade, backup, restore and remove drivers. If properly managed, the speed, stability, performance and new features of the PC and the devices increase.
Hardware manufacturers improve products constantly, and often published annually several driver updates. Smart Driver Updater Program to run automatic scans daily or weekly, and will not have to worry about outdated drivers. Frequently analyzes ensure that the system is optimized and always has the best performance. Whether you are upgrading the operating system as if you only need to reinstall Windows, Smart Driver Updater makesabackup of all computer controllers, and compressed inazip file in order to export and install them again easily. The functions of Backup and Restore avoid having to find and install new drivers one by one.
ဖိုင်တွေ Copy ကူးရာမှာ မြန်ဆန်လှတဲ့ TERACOPY PRO V 2.27 Full Version
IN Copy and Transfer, Software - ON 12:59 AM No comments
Windows မှာ ရိုးရိုးလေးပဲ Copy and Paste လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖိုင်နည်းနည်းလေးမှာ မသိသာပေမယ့် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးလာရင်တော့ သိသိသာသာ နှေးကွေးသွားတာကို ကြုံကြရပါတယ်... TeraCopy က ဖိုင်ဆိုဒ်နည်းနည်းလေးကိုရော ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးကြီးတွေကိုပါ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကူးပေးနိုင်ပါတယ်...
ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Crack ဖိုဒါထဲက msoe.dll ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို Copy ကူးပြီး Source Destination ထဲမှာ သွားထည့်ရမှာပါ.. ပြီးမှ ကီးကို သုံးပြီး Full ဖြစ်အောင်လုပ်ပါခင်မျာ....
IN Google Earth - ON 1:40 PM No comments
Google Earth pro ကို Portable အနေနဲ့အသုံးပြုချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ Memory stick
ထဲ့ဆောင်ထားပြီးမည်သည့်စက်မှာမဆို Install လုပ်စရာမလိုပဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်မျာ....
Ashampoo WinOptimizer 10.02.00 Full with Regkey/Crack
IN Optimizer - ON 5:51 AM No comments
ဒါလေးကို အရှေ့မှာတုန်းကတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်..။အခု 4.19.2013 ရက်နေ့ထုတ်ကလေး
ဖြစ်တာကြောင့်ထပ်တင်ပေးလိုက်ရတာပါ။ Ashampoo ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကတော့ ပြောစရာ
ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်အောက်မှာ ဒေါင်းသွားလိုက်ကြပါဗျာ...။
Computer maintenance is essential but time-consuming
No need to lose time
Don't let background tasks take time away from you! Let Ashampoo WinOptimizer 10 handle system complexity while you focus on what computers were made for - to get your work done!
Use Ashampoo WinOptimizer 10 to
New Features in Ashampoo WinOptimizer 10
Registry Optimizer: Improved detection rate for better results
Updated for maximum compatibility
Windows Vista x32 /x64
Windows7x32 /x64
Windows 8 x32 /x64
IN Multimedia Tools - ON 5:49 AM No comments
အရှေ့မှာတင်ပေးခဲ့ဖူးသလို လူကြိုက်လည်းများ ဒေါင်းတဲ့သူတွေလည်းပေါကြတဲ့ ကောင်းလေးလည်းဖြစ်ပါ
တယ်။ အခု Latest Version လေးမို့မတောင်းဆိုခင်ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူက Media Player ကောင်းကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက်ပါ။
Media File အမျိုးအစားတော်တော်များများကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပြီး
Audio File တွေကို Rip လုပ်ခြင်း၊ Burn ခြင်းစတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Internet Radio, TV တွေလည်းဖမ်းယူ နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
CCleaner Business Edition & Professional Edition v4.01.4093 Latest Full Version
IN Cleaners and Optimizer, Optimizer - ON 5:47 AM No comments
CCleaner Business Edition & Professional Edition
CCleaner Business Edition CCleaner Business Edition is the easiest way to make your PC instantly faster. It makes PCs run Clean, Safe and Fast!
အားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးနေပြီးသား Cleaner Software လေးဖြစ်ပါ
တယ်။ နောက်ပြီး Version 3.28 နောက်ပိုင်းကစလို့ မြန်မာ ဘာ
သာနဲ့ Windows 8 မှာ အသုံးပြုလာနိုင်တာကလည်း ကျေနပ်
စရာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းသိတွေမို့ အထွေအထူးပြောစရာမ
လိုတာကြောင့် Latest Version လေးကိုအောက်မှာဒေါင်းသွား
Some Features Of CCleaner
IN Desktop and Themes - ON 5:45 AM No comments
ဒါလေးက Windows 8 အသုံးပြုသူများအတွက် အရင် Windows 7
ပုံစံမျိုး Start Menu ပုံစံလေးပြန်ဖော်ပေးနိုင်မယ် ကောင်လေးပါ။
သူက Windows7မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Start Button အတိုင်း အပြည့်
အဝ အသုံးချနိုင်အောင် ယခု Version မှာ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Boot to desktop Your session would start with the desktop. Always!
StartIsBack restores original Windows7start menu with all its features: search, jump lists, drag&drop, pinned and recently used apps, fully customizable settings.Start button and Start menu look and behave exactly as they used to in Windows 7.StartIsBack includes fine-tuned visual styles and start button images that will fit your style and Windows 8 style.
Windows 8 forces you to organize new Start screen which can quickly becomealong list of mess with automatically pinned programs.This is no longer the case with StartIsBack! If you turn Start screen into Apps screen, you won't have the pain to manage two Start places.
It does not require any other tools or frameworks to install and can be installed without administrative privileges.Start menu is fully localized into your language with same metrics and names Windows7had.
IN Recovery Software - ON 11:49 PM No comments
မှားဖျက်မိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်ရှာပေးတဲ့ ဆောစ်ဝဲလ်လေးပါ ဓာတ်ပုံ အမျိုးစား ငါးဆယ်ကျော်ကို ပြန်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ် ဒီမှာ လေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်က
Mac OS X 10.6, 10.7 or 10.8 Mountain Lion.
IN Error Repair, Speed Up PC, Speed up window, System Cleaner - ON 11:15 PM No comments
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Registry Cleaner လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ~~ Cleaner Software များကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုနေသူများအဖို့ အကြိုက်တွေ့မယ် Software လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်.
Smart Registry Cleaner Pro comes withasimple tool pertaining to cleaning traces left by various purposes, such as IE, Firefox, and ICQ. Smart Registry Cleanser Pro doesn't slow system performance when scanning from the background, though the trial version can correct only 10 defective files. You'll find Clever Registry Cleaner Proafantastic addition to their own PC-maintenance regimens.
i) Auto scan and speed up your pc
ii) Keep system clean
iii) Speed up windows Startup and undo changes
iv) Boost system performance
v) PC performance checking and registry cleaning
vi) Windows registry error fix and registry optimization
vii) Easy error repair and command over your pc
viii) On demand updates, Backup and support
IN Facebook - ON 11:12 PM No comments
ဒီနည်းလေးကို အရင်က စီပုံးမှာ တယောက်အော်ဖူးတယ်ဗျ ... ကျွန်တော် အဲ့ချိန်တုန်းက ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီ့ အခက်အခဲတွေ့နေတာပါ ... အရင်တုန်းကတော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ .... အရင်တုန်းက Note မှာ Import your blog ဆိုတာမှာ blog ရဲ့ Feed လေးကို ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် အဆင်ပြေတယ် ... အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ်က ဒီဘက် Blog မှာ Post တင်လိုက်တာနဲ့ ဟိုဘက် Facebook မှာ သွားပြီးတော့ တခါတည်းပေါ်ရော ... နောက်တော့ကျတော့ Facebook က အဲ့ဒီ့ App လေးကို ဖျက်လိုက်တယ် ထင်ပါ့ ... အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ... အဲ့ဒါ မေးတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် အဲ့လိုလေးများ ရဦးမလားလို့ လိုက်ရှာ ကြည့်တယ် မရတော့ဘူး ... ဒါနဲ့ ရှာရှာ .. ရှာရင်းနဲ့ ဒီနည်းလေးကို တွေ့မိပါတယ် ... ဒီနည်းကတော့ တခါတည်း တော့ မရောက်ဘူး .. သူ့ရဲ့ Update time ရှိတယ် ... နာရီဝက် တစ်ခါ အနည်းဆုံးပါ ... နာရီဝက်နေရင် ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Page မှာ သူ့အလိုလို သွားပြီးတော့ တင်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် ခြွင်းချက် တစ်ခု က သူက အရင်ကလို Facebook Page မှာ ဖတ်လို့မရပဲနဲ့ Blog Post ရဲ့ လင့်ခ် ကို ပဲ ဖော်ပြပေးတာပါ ... အဲ့ဒီ့ လင့်ကလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် တော့ ကိုယ့် Blog ဆီကို Redirect လုပ်သွားပေးတာပါ ... အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ... မရှိတာထက်စာရင်တော့ ဒီနည်းလေးက အဆင်ပြေပါတယ် ... ကျွန်တော်တို့ စပြီးလုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ ...
ပထမဆုံး ဒီအောက်က လင့်ကလေးကို သွားလိုက်ပါခင်ဗျာ ...
ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့ မှာ Register လုပ်လိုက်ပါ့မယ် ... လုပ်ပြီးသွားပီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့မှာ အောက်က စာမျက်နှာလေး ပေါ်လာပါ့မယ်ခင်ဗျာ ...
နံပါတ် 1 မှာကိုယ့် Blog ရဲ့ name ကို ထည့်ပါမယ် ...
နံပါတ်2မှာကိုယ့် Blog ရဲ့ URL ကို ထည့်ပါမယ် ....
နံပါတ်3မှာတော့ Test rss feed ဆိုတာလေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် ...
အဲ့ဒီ့မှာ အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်မှာ အမှန်ခြစ်ကလေးနဲ့ Feed parsed Ok ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ...
အောက်က နံပါတ်4ကတော့ Advanced setting ပါ .. အဲ့ဒီ့မှာတော့ ကိုယ့်ကြိုက်သလို လိုသလိုလေး ပြင်ဆင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ....
ပြီးရင်တော့ ဟိုး အောက်ဆုံးမှာ Continue to step2ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါမယ်....
Feed was successfully created. Now click on the social network(s) you want to post to.
ဆိုပြီးတော့ အဲ့လိုလေးပေါ်လာပါ့မယ် .. အဲ့ဒီ့မှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ Service ကို ရွေးပေးပါ့မယ် ... Facebook ဆိုလည်း facebook ပေါ့ ... twitter ဆိုလည်း twitter ပေါ့နော် .. အခုက Facebook ဆိုတော့ Facebook ဆိုတာလေးကို ရွေးလိုက်ပါ့မယ် .... ရွေးလိုက်ရင် အောက်က ပုံလေးအတိုင်း ပေါ်လာ ပါလိ့မ်မယ်ခင်ဗျာ .... အဲ့ဒါဆိုရင် Connect with facebook ဆိုတာလေး ကို နှိပ်လိုက်ပါ ....
နှိပ်လိုက်ရင် နောက်စာမျက်နှာမှာ facebook log in ၀င်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် .. ၀င်လိုက်ပါ ... ၀င်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ စောစောက စာမျက်နှာလေး ကို ပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ အောက်ကပုံစံလေးနဲ့ ပြပါလိမ့်မယ် ....
ပုံလေးထဲကလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Page ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ...
ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Create Service ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ ... နှိပ်လိုက်ရင် သူ ခဏအလုပ်လုပ် နေပါလိမ့်မယ် .. Success ဖြစ်လို့ အလုပ်လုပ်ပြီးသွားရင်အောက်မှာ All Done ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ... ပေါ်လာရင်တော့ All Done ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Go to Dashboard ကို နှိပ်လိုက်ပါ ... နှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Service ပေါ်နေပါလ်ိမ့်မယ် ...
Blog Title ရယ် ... Blog က ယူထားတဲ့ Feed ရယ် ... ပြီးရင် တော့ Check now ဆိုတာကို လည်း နှိပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ .... ကိုယ် Post တစ်ခု တင်လိုက်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Page မှာ သွားပြီးတော့ အောက်ကလို ပုံစံလေးတွေနဲ့ ပေါ်နေပါလ်ိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ....
အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..... Twitter ဆိုလည်း အဲ့လိုလေးပဲလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ... သူက Service တွေ အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ် ... :)
အားလုံး အစစအရာရာ အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက် .....
IN Facebook - ON 11:10 PM No comments
ဖေ့ဘုတ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ .
Facebook ကတွေ့ လို့ မလာပေးတာပါ.............
IN Speed Up Internet, Speed up window, System Cleaner - ON 11:01 PM No comments
လူတိုင်းအကြိုက်တွေ့ကြမယ့် Cleaner Software လေးဖြစ်ပါတယ်..Cleaner Tools ပေါင်းများစွာအပြင်
Games Booster , Files Protector စတဲ့ စတဲ့ အသုံးဝင် Tools များပါဝင်တဲ့အတွက် သုံးစွဲသူကို အကြိုက်
3] Enter Username, Email and Serial
IN Internet Download Manager - ON 10:45 PM No comments
မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ အခုလည်း Version အသစ်ထွက်လာလို့ အ
မပြေဘူးလို့ ပြောနေကြသူများအတွက် Patch File ကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခေါက်ထည့်
IN Uninstaller - ON 1:11 AM No comments
Antivirus Programs တွေကို ဟိုဟာကောင်းနိုးနိုး သည်ဟာကောင်းနိုးနိုး နဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်ရင်း နောက်ဆုံး မိမိ စက်နဲ့ မကိုက်ညီလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်, မလိုချင်တော့လို့ တခြား Antivirus Program ကိုပြောင်းသုံးချင်တဲ့အခါ လက်ရှိစက်ထဲက ရှိနှင့်ပြီးသား Antivirus Program ကို အရင်ဆုံး Uninstall လုပ်ပစ်ရပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို Uninstaller ဆော့ဝဲလ် တွေသုံးပြီး ထုတ်ထုတ် အစ,အန လေးတွေ ကျန်နေတတ်ပြီး ထုတ်မရတာမျိုး , နောက်ထပ် Antivirus Program ကိုလည်း ထပ်ထည့်မရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ် .....။ အဲ့ဒီပြဿနာတွေကို ... ဒီ AV Uninstall Tools ကရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်..။ နောက်ဆုံး Version လေးပါ .. နာမည်ကြီး Antivirus အမျိုး အစားပေါင်း (၄၀) ကျော် ကို မိမိ ကွန်ပြူတာထဲကနေ အပြတ်ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Software ကောင်းလေးမို့ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း ဆောင်ထားကြစေလိုပါတယ်....။ Autorun ဆိုတဲ့ .exe ဖိုင်လ်လေးကို Double Click ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။ စစချင်း Russian Language နဲ့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘက်မှာ EnglishLanguage လေးကိုနှိပ်ပြီးLanguage ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ် Uninstall လုပ်ချင်တဲ့ Antivirus အမျိုးအစားကိုရွေးပြီး Uninstall ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Antivirus ဟာ မိမိကွန်ပြူတာထဲကနေ အစ,အန မကျန်အောင် ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်...။ နောက်ထပ် မိမိ အသုံးပြုလိုတဲ့ Antivirus Program ကိုလည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ Install လုပ်နိုင်ပါပြီ...။ Antivirus Program တွေ ဖြုတ်မရ , ထုတ်မရလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...။
Windows 8 အတွက်ပါ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ခင်မျာ....
AV Uninstall Tools Pack -afree package of tools designed to remove different antivirus programs. It includes tools for removing more than 30 anti-virus and anti spyware programs and firewalls.They are necessary in those cases when it is not possible to completely remove the antivirus program in the standard way, or in the process of removing errors. These utilities are completely removed all files, drivers, services and registry entries left behind by antivirus programs. These tools will be useful for those who often deals with reinstalling and configuring software.
For some utilities are present how to use English and / or Russian. Instructions are located in the “Readme”. If they are not, then follow the general guidelines:
- Remove Antivirus via “Control Panel” -> “Add or Remove Programs.”
- Run the removal tool (in Windows Vista / 7, click the right mouse button and select “Run as administrator”)
Modern Combat3apk For Andriod Free Download Full Version
IN Android Game - ON 12:27 AM No comments
andriod သမားများအတွက် Modern Combat3ဂိမ်းလေးပါ လိုအပ်ရင်အောက်မှာပါ
IN PC games - ON 12:23 AM No comments
System Requirements! File Size:2.86GB
ဒေါင်းဖို့ ရန်အတွက် uTorrent ကို အရင်ဒေါင်းပြီး install လုပ်ထားလိုက်ပါ ပြီးမှ အောက်က ဒေါင်းလော့ကို နှိပ်ယူပါခင်မျာ....